နှလုံးလမျးကွောငျးက ပွောတဲ့ သငျ့အခဈြရေး (အခဈြရေးလက်ခဏာဗဒေငျ) – Focus Myanmar
သငျ့ရဲ့ လကျဖဝါးမှာရှိနတေဲ့ နှလုံးသားလမျးကွောငျးက သငျ့ရဲ့ အနာဂါတျအခဈြရေးကို ဖျောပွပေးနိုငျပါတယျ။ နှလုံး လမျးကွောငျးကိုတော့ (Love Line) လို့လညျး ချေါပါတယျ။ အကောငျးဆုံး နှလုံးသားလမျးကွောငျးရဲ့ပုံစံကတော့ လမျးကွောငျးက နကျရှိုငျးမယျ၊ ရှုပျထှေးမနပေဲ ရှငျးလငျးပွတျသားမယျ၊ အကြိုးအပွတျမရှိတာမြိုးပါ။ နှလုံးသားလမျးက တဈဆငျ့ သငျ့ရဲ့အနာဂါတျ အခဈြရေးကို ဘယျလိုသိနိုငျသလဲဆိုတော့….
နှလုံးသားလမျးကွောငျးက အရမျးတိုမယျဆိုရငျတော့ သငျဟာ အထီးကနျြနရေတတျတဲ့ သူမြိုးပါ။ အနားမှာ အပေါ ငျးအသငျးမိတျဆှတှေေ ရှိနရေငျတောငျမှ တဈယောကျတညျး အထီးကနျြဝဒေနာကို ခံစားနရေတတျတဲ့ သူမြိုးပါ။ သငျ့ရဲ့ အခဈြရေးကတော့ ပနျးခငျးလမျးမဟုတျဘဲ၊ ဆူးခငျးလမျးလို အခဈြရေးမြိုးနဲ့ ကွုံရတတျတယျ။ ခြောမှတေဲ့ ခဈြခရီးလမျးမြိုးကို မပိုငျဆိုငျရတတျပါဘူး။
#နှလုံးလမျးကွောငျး ရှညျရငျ…(Fig 2)
နှလုံးလမျးကွောငျးရှညျတယျ၊ ဖွောငျ့မတျတယျ၊ ခှဲဖွာထှကျတာမြိုး မရှိဘူးဆိုရငျတော့ အခကျအခဲတှေ အမြားကွီး ကွုံတှေ့ ဖွတျကြျောပွီး အောငျမွငျမှုကို ပိုငျဆိုငျရတတျပါတယျ။ ဒီလိုလမျးကွောငျးပိုငျရှငျက ယောကျြားဆိုရငျ မိနျးမ ကွောကျရသူပါ။ မိနျးကလေးဆိုရငျတော့ ခဈြသူအပျေါ အရမျးကို သစ်စာရှိသူပါ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ဘဝမှာတော့ မတညျမငွိမျ ကသောငျးကနငျး အခွအေနမြေိုးနဲ့ မကွာခဏ ကွုံရတတျပါတယျ။ ဒီလိုနှလုံးလမျးကွောငျးပိုငျရှငျတှဟော ခဈြသူ(သို့)လငျမယားနဲ့တဈကွိမျ ပွတျစဲဖူးရငျ သူမြားထကျပိုပွီး နကျနကျရှိုငျးရှိုငျးခံစားကွကှေဲတတျသူပါ။
#လမျးကွောငျးရဲ့ အဆုံးသတျ..(Fig 3)
ပုံ(၃)မှာ ပွထားတဲ့ အတိုငျးနှလုံးလမျးကွောငျး လကျညှိုးအောကျမှာ အဆုံးသတျသှားတယျဆိုရငျတော့ ဒါဟာ ကောငျးတဲ့လက်ခဏာပါ။ အခဈြ၊ အိမျမကျနဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ ကွီးကွီးမားမားရှိသူပါ။ အရမျးခဈြတတျတဲ့သူမြိုးဆိုတာကို ပွနတောပါ။
လကျညှိုးနဲ့လကျခလယျကွားမှာ အဆုံးသတျသှားတယျဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ အခဈြဟာ အဖွူထညျပါ။ ဘာကိုမှ မြှျောလငျ့မထားပဲ ခဈြသူကို အဖွူထညျသကျသကျ၊ အခဈြစဈ အခဈြမှနျနဲ့ ခဈြတတျတဲ့သူပါ။
ပုံ(၅)မှာ ပွထားသလို လမျးကွောငျးက အပျေါကို ခုံးပွီး တတျသှားတယျဆိုရငျ တော့ သငျဟာ ရိုမနျတဈဆနျသူပါ။ ခဈြသူကို အမွဲတမျး ရိုမနျတဈဆနျဆနျ ခဈြတတျသူပါ။
ပုံ(၆)ကလို လမျးကွောငျးက အောကျကို ကှေးကောကျသှားတယျဆိုရငျတော့ ဒါက မကောငျးတဲ့ negative chara cter ကိုပွနတောပါ။ ရငျထဲက ခဈြမတ်ေတာကို ထုတျဖျောဖို့ ဝနျလေးတတျ၊ မဝံ့မရဲ ဖွဈတတျသူမို့ ဘေးကသူတှရေဲ့ အားမလိုအားမခွငျးကို ခံရတတျသူပါ။ အခဈြနဲ့ပတျသကျရငျ သှေးကွောငျတတျတဲ့သူမြိုးပါ။
ပုံ(၇)ကလို ဖွောငျ့တနျးနတောမြိုးကတော့ သငျဟာ တညျငွိမျသူ၊ ဖျောရှတေတျသူ၊ ခဉျြးကပျရလှယျသူဆိုတာကို ပွနတောပါ။ ဒါပမေယျ့ အခဈြနဲ့ပတျသကျရငျတော့ အရှကျအကွောကျကွီးလှနျးသူပါ။ ခဈြသူကို အရမျးအလြော့ပေး အလိုလိုကျလှနျးပွီး၊ သူပွုသမြှ နုမယျဆိုတဲ့ အရှုံးသမားစိတျကို ရငျမှာပိုကျထားသူပါ။ လမျးကွောငျးက အရမျးရှငျးလငျးမယျ၊ လမျးကွောငျးကပွတျတာမြိုးတှေ လုံးဝမရှိရငျတော့ သငျ့ဟာ တညျငွိမျပွီး ပြျောစရာကောငျးတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျရတတျပါတယျ။
(Fig 8) မှာ ပွထားသလို နှလုံးလမျးကွောငျး အဆုံးသတျမြိုးဖွဈနတေယျဆိုရငျတော့ သငျဟာ အခဈြနဲ့ပတျသကျရငျ အရာရာကို ပေးဆပျလိုကျမယျဆိုတဲ့ သူမြိုးပါ။
(Fig 9) ကလို အဆုံးသတျမြိုးဖွဈနရေငျတော့ ကွမျးတမျးတဲ့ အခဈြခရီးလမျးမြိုးကို ဖွတျသနျးရတတျပါတယျ။
(Fig 10) လို လမျးကွောငျးမြိုးဆိုရငျတော့ အခဈြစဈနဲ့ဆုံပွီးရငျ မပွောငျးလဲတတျတော့တဲ့ စိတျဓာတျပိုငျရှငျမြိုးပါ။
(Fig 11) လို လမျးကွောငျးကနကေိုငျးတှေ အပျေါကို ထှကျနတောမြားနရေငျတော့ ဒါက ကောငျးတဲ့ လက်ခဏာပါ။ အခဈြနဲ့ပတျသကျရငျ ကံကောငျးတတျသူပါ။
(Fig 12) လိုမြိုးဆိုရငျတော့ အခဈြရေးကံနိမျ့တတျပါတယျ။ ပွိုကှဲလှယျတဲ့ အခဈြရေးမြိုးနဲ့ ကွုံရတတျပါတယျ။
(Fig 13) ဆိုရငျတော့ ဆနျ့ကငျြဘကျလိငျကို ဆှဲဆောငျနိုငျတဲ့ စှမျးရညျတှေ အလြှံအပယျ ပိုငျဆိုငျထားသူပါ။
(Fig 14) လိုဆိုရငျတော့ အငွငျးပှားစရာ လကျထပျခွငျးမြိုးနဲ့ ကွုံရတတျပါတယျ။ အိမျထောငျရေး ကံညံ့တတျပါတယျ။
Credit: origianl uploder
နှလုံးလမ်းကြောင်းက ပြောတဲ့ သင့်အချစ်ရေး (အချစ်ရေးလက္ခဏာဗေဒင်)
နှလုံး လက်ဖဝါး အချစ်ရေး
သင့်ရဲ့ လက်ဖဝါးမှာရှိနေတဲ့ နှလုံးသားလမ်းကြောင်းက သင့်ရဲ့ အနာဂါတ်အချစ်ရေးကို ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ နှလုံး လမ်းကြောင်းကိုတော့ (Love Line) လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး နှလုံးသားလမ်းကြောင်းရဲ့ပုံစံကတော့ လမ်းကြောင်းက နက်ရှိုင်းမယ်၊ ရှုပ်ထွေးမနေပဲ ရှင်းလင်းပြတ်သားမယ်၊ အကျိုးအပြတ်မရှိတာမျိုးပါ။ နှလုံးသားလမ်းက တစ်ဆင့် သင့်ရဲ့အနာဂါတ် အချစ်ရေးကို ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲဆိုတော့….
နှလုံးသားလမ်းကြောင်းက အရမ်းတိုမယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ အထီးကျန်နေရတတ်တဲ့ သူမျိုးပါ။ အနားမှာ အပေါ င်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေ ရှိနေရင်တောင်မှ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ဝေဒနာကို ခံစားနေရတတ်တဲ့ သူမျိုးပါ။ သင့်ရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ ပန်းခင်းလမ်းမဟုတ်ဘဲ၊ ဆူးခင်းလမ်းလို အချစ်ရေးမျိုးနဲ့ ကြုံရတတ်တယ်။ ချောမွေ့တဲ့ ချစ်ခရီးလမ်းမျိုးကို မပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါဘူး။
#နှလုံးလမ်းကြောင်း ရှည်ရင်…(Fig 2)
နှလုံးလမ်းကြောင်းရှည်တယ်၊ ဖြောင့်မတ်တယ်၊ ခွဲဖြာထွက်တာမျိုး မရှိဘူးဆိုရင်တော့ အခက်အခဲတွေ အများကြီး ကြုံတွေ့ ဖြတ်ကျော်ပြီး အောင်မြင်မှုကို ပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုလမ်းကြောင်းပိုင်ရှင်က ယောက်ျားဆိုရင် မိန်းမ ကြောက်ရသူပါ။ မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ ချစ်သူအပေါ် အရမ်းကို သစ္စာရှိသူပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ဘဝမှာတော့ မတည်မငြိမ် ကသောင်းကနင်း အခြေအနေမျိုးနဲ့ မကြာခဏ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနှလုံးလမ်းကြောင်းပိုင်ရှင်တွေဟာ ချစ်သူ(သို့)လင်မယားနဲ့တစ်ကြိမ် ပြတ်စဲဖူးရင် သူများထက်ပိုပြီး နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းခံစားကြေကွဲတတ်သူပါ။
#လမ်းကြောင်းရဲ့ အဆုံးသတ်..(Fig 3)
ပုံ(၃)မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်းနှလုံးလမ်းကြောင်း လက်ညှိုးအောက်မှာ အဆုံးသတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါ။ အချစ်၊ အိမ်မက်နဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ကြီးကြီးမားမားရှိသူပါ။ အရမ်းချစ်တတ်တဲ့သူမျိုးဆိုတာကို ပြနေတာပါ။
လက်ညှိုးနဲ့လက်ခလယ်ကြားမှာ အဆုံးသတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ အချစ်ဟာ အဖြူထည်ပါ။ ဘာကိုမှ မျှော်လင့်မထားပဲ ချစ်သူကို အဖြူထည်သက်သက်၊ အချစ်စစ် အချစ်မှန်နဲ့ ချစ်တတ်တဲ့သူပါ။
ပုံ(၅)မှာ ပြထားသလို လမ်းကြောင်းက အပေါ်ကို ခုံးပြီး တတ်သွားတယ်ဆိုရင် တော့ သင်ဟာ ရိုမန်တစ်ဆန်သူပါ။ ချစ်သူကို အမြဲတမ်း ရိုမန်တစ်ဆန်ဆန် ချစ်တတ်သူပါ။
ပုံ(၆)ကလို လမ်းကြောင်းက အောက်ကို ကွေးကောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါက မကောင်းတဲ့ negative chara cter ကိုပြနေတာပါ။ ရင်ထဲက ချစ်မေတ္တာကို ထုတ်ဖော်ဖို့ ဝန်လေးတတ်၊ မဝံ့မရဲ ဖြစ်တတ်သူမို့ ဘေးကသူတွေရဲ့ အားမလိုအားမခြင်းကို ခံရတတ်သူပါ။ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင် သွေးကြောင်တတ်တဲ့သူမျိုးပါ။
ပုံ(၇)ကလို ဖြောင့်တန်းနေတာမျိုးကတော့ သင်ဟာ တည်ငြိမ်သူ၊ ဖော်ရွေတတ်သူ၊ ချဉ်းကပ်ရလွယ်သူဆိုတာကို ပြနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ အရှက်အကြောက်ကြီးလွန်းသူပါ။ ချစ်သူကို အရမ်းအလျော့ပေး အလိုလိုက်လွန်းပြီး၊ သူပြုသမျှ နုမယ်ဆိုတဲ့ အရှုံးသမားစိတ်ကို ရင်မှာပိုက်ထားသူပါ။ လမ်းကြောင်းက အရမ်းရှင်းလင်းမယ်၊ လမ်းကြောင်းကပြတ်တာမျိုးတွေ လုံးဝမရှိရင်တော့ သင့်ဟာ တည်ငြိမ်ပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။
(Fig 8) မှာ ပြထားသလို နှလုံးလမ်းကြောင်း အဆုံးသတ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင် အရာရာကို ပေးဆပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ သူမျိုးပါ။
(Fig 9) ကလို အဆုံးသတ်မျိုးဖြစ်နေရင်တော့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ အချစ်ခရီးလမ်းမျိုးကို ဖြတ်သန်းရတတ်ပါတယ်။
(Fig 10) လို လမ်းကြောင်းမျိုးဆိုရင်တော့ အချစ်စစ်နဲ့ဆုံပြီးရင် မပြောင်းလဲတတ်တော့တဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်မျိုးပါ။
(Fig 11) လို လမ်းကြောင်းကနေကိုင်းတွေ အပေါ်ကို ထွက်နေတာများနေရင်တော့ ဒါက ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာပါ။ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင် ကံကောင်းတတ်သူပါ။
(Fig 12) လိုမျိုးဆိုရင်တော့ အချစ်ရေးကံနိမ့်တတ်ပါတယ်။ ပြိုကွဲလွယ်တဲ့ အချစ်ရေးမျိုးနဲ့ ကြုံရတတ်ပါတယ်။
(Fig 13) ဆိုရင်တော့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တွေ အလျှံအပယ် ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။
(Fig 14) လိုဆိုရင်တော့ အငြင်းပွားစရာ လက်ထပ်ခြင်းမျိုးနဲ့ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေး ကံညံ့တတ်ပါတယ်။
ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲမြင့်တက်လတ္တံ့သော ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ တစ်နှစ်စာ ဟောစာတမ်း
ပရဈကွျော မစားဖွဈတော့တဲ့ အကွောငျးရငျးကိုပွောပွလာတဲ့ ဦးဇငျးတဈပါး